I-Kik Chat Limit ifikelele kwimpazamo: Ungayisombulula njani? | XperimentalHamid
I-Kik Chat Limit ifikelele kwimpazamo: Ungayisombulula njani?
Novemba 7, 2020 by IJaveria Dinar
Eli nqaku lishwankathela malunga nempazamo yesicelo esithandwayo somthunywa esaziwa ngokuba yi-Kik Chat Limit.
Izicelo zemiyalezo yangoku ziyathandwa kuwo onke amazwe afana ne-Australia, i-United Kingdom, Canada, United States, Netherlands kunye namanye.
Zininzi ii -apps zemiyalezo ekhawulezileyo njenge-Kik Chat. Ngezixhobo zokuthumela imiyalezo, kuza izithintelo ezithile okanye iibhugi. Kukwanjalo kwimeko ye-Kik Chat. Namhlanje, siza kuxoxa Kik Ingxoxo Limit ifikelele.
Siza kwabelana ngalo lonke ulwazi esinalo malunga noku. Ke, sicela abafundi bethu ukuba bafunde inqaku ukuya esiphelweni ukuze ungaphoswa luhlaziyo olubalulekileyo malunga noku. Ndiyathemba ukuba uyakonwabela ukufunda!
Intshayelelo To Kik Chat Messenger
Intshayelelo yokunciphisa umda kwiimpazamo
Kwenzeka Ntoni Xa Ndilinganisiwe?
Umyinge weMilinganiselo useta kwakhona ezinzulwini zobusuku kuMsebenzisi ngamnye.
Uhlelo lokusebenza lwe-Kik Messenger yinkqubo yemiyalezo ekhawulezileyo. Le app messenger yaziwa njenge Kik. Yisoftware eyenziweyo eyenziwe yinkampani egama lingu-interactive, eseKhanada.
Le app yokuthumela imiyalezo yaqaliswa ngo-2010. Iyafumaneka kwakhona kwizixhobo ze-ios. Siza kufunda ngenye yeempazamo zolu setyenziso, lubizwa ngokuba yi-Kik Chat Limit.
Umda we-Kik Chat Limit Ufikelele kwimpazamo xa uwele umda wemiyalezo ngosuku. Kule mpazamo, i-bot yalo mthunywa ayinako ukuthumela eminye imiyalezo.
Ukusikelwa umda kusetwe kwangaphambili ngokubhekisele kwiingxelo. Umthunywa ubonakalisa impazamo engama-429 xa uthe wagqitha kumda wonobumba ngosuku.
Xa umyinge wereyithi ufikelelwe, i-bot ayinakukwazi ukuthumela eminye imiyalezo kumsebenzisi. I-bot iya kufumana impazamo engama-429 ukubuya kwiziseko zophuhliso ze-Kik, ebonisa ukuba umda werhafu ugqithile.
Umda wale miyalezo uhlaziywa rhoqo ezinzulwini zobusuku. Umda wemiyalezo kubasebenzisi be-iphone yi-1000 kwaye kubasebenzisi be-android abangama-600. Le mida isebenza iiyure ezingama-48 xa zizonke.
Yonke impazamo ineendlela zayo ezinokusonjululwa ngayo. Kuyafana nange-Kik Chat Limit Erached Impazamo. Nangona kunjalo, isisombululo esichazayo nesichukumisayo asikafunyanwa. Kodwa okwangoku, kuya kufuneka, kuqala kwiinto zonke, uye kuseto lwayo kwaye ukhiphe usetyenziso.
Emva koko, kuya kufuneka ucime i-cache kunye neefayile zedatha ezinxulumene nomthunywa. Emva koko kufuneka uqalise kwakhona ifowuni yakho kwaye ufake kwakhona insiza nge-imeyile eyahlukileyo. Uninzi lwabasebenzisi, eli qhinga lisebenzile. Ke siyakucebisa ukuba nonke nijonge eli qhinga.
Xa ucinga malunga nokuhamba kokuncokola kwebhot yakho, eyona nto ayibonayo umsebenzisi xa esebenzisa ibot yakho yinto ebalulekileyo ekufuneka uyigcinile engqondweni. Oku kuyinyani ngokubetha-ngakumbi, ukuthumela iibhetshi zemiyalezo ngokulandelelana ngokukhawuleza kwincoko.
Xa uthumela imiyalezo emininzi kwibhetshi enye, kubalulekile ukufaka ukulibaziseka phakathi kwemiyalezo. Xa ukulibaziseka kungasetyenziswanga, endaweni yoko umsebenzisi ufumana udonga lwemiyalezo eyahlukileyo, eminye inokunqunyulwa ngokuxhomekeke kubude bemiyalezo.
Sebenzisa ukulibaziseka kuvumela i-bot yakho ukuba ithumele imiyalezo emininzi njenge-batch, kodwa umsebenzisi ufumana ngamnye emva kokulibaziseka okufutshane, ke ngoko ubanike ithuba lokufunda umyalezo ngamnye.
Funda malunga Ukuzinza.
Ukugqitywa komda weKik Chat Limit kufikelelwe kwimpazamo kukuba ungajonga malunga nesisombululo esibonelelweyo. Nangona kunjalo, silindele ukuba i-app yomthunywa ujonge lo mbandela kwaye wenze okufunekayo. Ndiyathemba ukuba le bug izakufumana isisombululo kuhlaziyo olulandelayo.
Siyathemba ukuba Kik Chat kwandisa umda wengxoxo njengoko abantu abaninzi ukuba imiba nayo. Wonke umntu ufuna ukufumana umda ogqithileyo kwimiyalezo, yile nto sicinga ngayo. Ukuba unoluvo malunga nesi sihloko, bhala umgca ongezantsi. Siya kukuvuyela ukukuva kuwe.
iindidi Mobile Apps, iindaba, Tech tags Uyilungisa njani imida yokuncokola ye-kik efikelele kwimpazamo?, Yintoni kik umda chat kufikelelwe impazamo? Post yokukhangela
Iikhowudi zeHero Simulator iiKhowudi kunye nokunye
I-Xbox Game Bar Impazamo 0x803f8001-Impazamo eChaphazela uMdlalo wakho